Go Green: 5 Dariiqo oo Joojinta Isticmaalka CD-yada iyo DVD-yada | Martech Zone
Go Green: 5 Dariiqo oo Joojinta Isticmaalka CD-yada iyo DVD-yada
Monday, August 25, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Sida ku xusan EPA, 5.5 milyan oo CD, xirmooyinkooda iyo malaayiin CD-yo muusig ah ayaa la tuuraa sanad kasta iyadoo aan dib loo isticmaalin. CD-yada iyo DVD-yada waxaa laga sameeyaa Aluminium, Dahab, Dyes, qalab kale oo kala duwan - laakiin badankood Polycarbonate iyo Lacquer. Polycarbonate iyo Lacquer waxaa si toos ah looga soo saaraa saliida ceyriin.
Istaatistikada way sii socotaa, bil kasta 100,000 rodol oo CD-yada iyo DVD-yada ah sidoo kale waa ay duugoobayaan. Ma jiro habab wax ku ool ah oo dib-u-warshadaynta agabka sidoo kale! Sida laga soo xigtay Warshadaha Saliidda lafteeda, ilaa 1.1 galaan oo foosto kasta (42 galaan) oo saliid ah ayaa aada kiimikada kiimikada.
Waxaan u maleynayaa inay ku socoto iyada oo aan la sheegin, markaa, u wareejinta dariiqa xisaabinta adeegeyaal macquul ah iyo ku biirista barnaamijka softiweerka sida barnaamijyada Adeegga ah ayaa runtii ka caawin kara deegaanka. Ma hubo inta boqolkiiba ee foostada saliidda ah ay galeyso abuurista cajalado isafgarad ah, laakiin dhab ahaantii waxaan noqon karnaa wax badan oo wax ku ool ah adoo adeegsanaya USB-yada iyo shabakadaha faylalka la wadaago halkii laga gubi lahaa saxannada.
Marka lagu daro isticmaalaya saxannada, ma caawin karo laakiin waxaan u maleynayaa inay jirto tamar badan oo si aan loo baahnayn loogu isticmaalo soosaarka iyo daabulida saxannadaas. Xaqiiqdii isku beddelka ballaadhinta caagga ah ayaa natiijo wax ku ool ah u leh aadanaha, sax? Waan ogahay inay jiraan waxyaabo kale oo badan taas oo door weyn ka ciyaara, laakiin muxuu qofna uga hadlin warshadan aan loo baahnayn?
Waxaan la yaabanahay sababta loo adeegsanayo Software sida Service a ma aha qayb muhiim ah Cagaar cagaaran talo siiyaa ganacsiyada? Darawalada adag ee Terabyte, USB drives, Kaydka khadka tooska ah ee internetka Online kuwan oo dhami waa kuwo si fudud loogu heli karo qofkasta inuu isticmaalo. Qofna yuusan sii iibsanayn CD-yada iyo DVD-yada. Xitaa anigu kama sii kireysto filimada DVD-ga, waxaan ku kireystaa kan Apple TV!
5 Fikradood oo kaa Xakamaysa Cudurkaaga CD
U beddel Software-ka Adeeg ahaan. Tusaalooyin: Ka tuur xafiiska Microsoft ee barnaamijyada Google iyo Microsoft CRM ee iibka. Ma jiraan rakibitaanno, ma jiraan wax keyd ah, ma jiro qalab… kaliya biraawsar!
Ka beddel kireysiga DVD-yada iyo iibsashada CD-yada muusikada si aad u soo degsato Music-yada aad u soo iibsanayso ama Kireynta Filimka iTunes, AppleTV iyo adeegyada kale ee caymiska. iTunes ayaa laga yaabaa inay tahay inay dib uga fikiraan astaantooda!
Ka beddel kaydinta iyo u rarida xogta CD-yada iyo DVD-yada u wareeji USB Drives. USB Drive-ku waxay hayaan xog dheeri ah waana la qaadi karaa, dhaqso badan, mana duugoobaan. (Ka taxaddar in kastoo, dhammaan wadayaasha USB-yada looma simin!) Iibso naftaada darawal weyn oo la qaadi karo si aad u taageerto shaqadaada oo aad ugu soo qaadatid horay iyo gadaalba si aad u shaqeyso. Meelna ma aado aniga la'aanteed Baasaboorka Digital Digital, waa maal gashigii ugu fiicnaa ee aan abid sameeyo!
Ku wareeji faylasha waaweyn shirkadaha kale adoo u maraya iibiyaasha SaaS ee internetka sida Dhigid, YouSendIt, DirThisFile, MailBigFile, Iyo SendSpace.
Ka takhalus CD-gaaga iyo DVD-gaaga. Markaad dalbaneysid laptop-kaaga soo socda, ha ku darin mid aad iibsato. Markii aad iyaga ka dalbato xafiiskaaga, keydso xoogaa lacag oo soo iibso darawallada USB halkii aad ka horumarin lahayd qoraaga DVD-gaaga. Adiga oo aan iyaga laga helin, waxaad u badnaan doontaa inaad tagto oo aad gubto CD-ga soo socda!
Xaqiiqdii, sababta kaliya ee aan CD-yada mar dambe u adeegsadaa waa buugaag CD-ga ah ama u gubo muusig wadashadayda shaqada iyo ka imaanshaha. Waan daawanayay sicirka, in kastoo, waxaan heli karaa sitikoyo gawaari oo beddel ah oo leh aqbasho USB ah iyo sidoo kale koontaroolada iPod wax kayar $ 200! Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aan dhaqaaqi lahaa!
Google Adsense Hada Lacageynta Cunteyda
Agoosto 28, 2008 saacaddu markay ahayd 1:07 PM
Nin yahow, ma aanan fahmin inta aan sida dhabta ah u wada isticmaalno CD-yada iyo DVD-yada illaa aan aqriyo qoraalkaaga. In kasta oo aan ku faani karo inaan horeyba #s 1, 3 iyo 4 ugu sameeyo liiskaaga!